April 22, 2020 – Kichuu
Dhaabbanni WFP: Sababa Koronaatiin hojiiwwan gargaarsa Itoophiyatti taasisuuf Doolaara Biiliyoona 2 na barbaachisa jedhe.
Dhaabbanni World Food Program (WFP) sababa Koronaatiin hojiiwwan gargaarsa Itoophiyatti taasisuuf Doolaara Biiliyoona 2 na barbaachisa jedhe. Dhaabbanii sagantaa nyaata addunyaa tatamsa’ina vayirasii koronaa ilalchisuun ibsa baaseen, Itoophiyati godhaa kan ture gargarsa nyatafi kannen biroos [Read More]
Breaking Oduu Oowwiittu Haala Yeroo Ebl/Apr 23/2020
Breaking Oduu Oowwiittu Haala Yeroo Ebl/Apr 23/2020 ODM Ebla 22,2020 kutaa 42ffaa haala yeroo siyaasaa Oromoo fi Itoophiyaarratti dubbanna.Dhimma qondaaltoonni Mootummaa Itoophiyaa kan bulchiinsa Dr.Abiyyi aangoo irra yommuu ka’anii uummata gidduutti ofkoraa uumurrattis ni dubbanna.Dhimma [Read More]
ONN: Dhaamsa Abbaacabsaa warra TV ONNiif!
ONN: Dhaamsa Abbaacabsaa warra TV ONNiif Laal! ONN sababa kamiinuu haa ta’uutii satellite 🛰 irraa bu’uus, hojii maaf dhaabdan? Zamana kana galanni qalata teknooloojiitiif haa ta’uutii hambaa (platform) adda addaatu jiru yaada keenya ummata biraan gahuuf– [Read More]
COVID-19: Why do more seem to die in some countries than others? Andy Murray (newseu)—Around 10,000 extra people are dying each week in Europe, according to the latest information from The University of Oxford’s Centre [Read More]
Distributing Chinese foundations’ donation reflects African integration: Ethiopian airlines ADDIS ABABA, April 22 (Xinhua) — The Ethiopian Airlines Group on Wednesday disclosed the completion of flight and delivery of the second round shipments of life-saving [Read More]
NEWS: ETHIOPIA, SOMALILAND MILITARY OFFICIALS DISCUSS #COVDI19 PREVENTION JOINT EFFORTS ETENESH ABERA @ETENESHAB Addis Abeba, April 22/2020 – High level military officials from Ethiopia and Somaliland met and discuss works being implemented to prevent the spread of [Read More]
Ethiopia at risk of Yellow Fever outbreak, WHO says By Jerry Omondi (africa)—-The World Health Organization (WHO) has warned that Ethiopia risks experiencing a second scourge after yellow fever was reported in the south of [Read More]
Ethiopia Ends Blanket Protection for Eritrean Refugees By Simon Marks ADDIS ABABA – (voanews)—Ethiopia has stopped granting automatic asylum to Eritreans entering the country. The United Nations and aid groups say the previously unannounced policy change, [Read More]
Poolisii Addaa Oromiyaa moo Janjaweed Oromiyaa. Bara 2002 keessa Sudaan Daarfuur keessatti humni milishaa ummatatti roorrisu tokko dhalate. Maqaan isaas Janjaweed jedhama. Janjaweed jecha Afaan Arabaa lamarraa dhufe. Jinnii (Spirit) fi Jawad (Horse) jedhutu walitti [Read More]